Kooxda Barcelona oo la soo warinayo inay duminayso garoonkeeda Camp Nou, isla markaana dhisanayso garoon cusub oo ay ku baxayso 1.3 Bilyan oo gini – Gool FM
(Barcelona) 21 Dis 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay gabi’ahaanba duminayso garoonkeeda Camp Nou, isla markaana ay ansixisay in 1.3 Bilyan oo gini dib loogu dhiso garoonkeeda Nou Camp, iyadoo la og yahay inay Barca weli dhexda kaga jirto xaalad dhaqaale oo aad u daran.
Naadiga reer Catalonia ayaa samaysay cod-bixin ku saabsan qorsha dib u dhiska garoonka Camp Nou, waxaana ansixiyey 42,693 xubnood (Afartan iyo labo kun, lix boqol sagaashan iyo saddex xubnood) kuwaasoo qaab Online ah ku coddeeyey.
5,055 xubnood (Shan kun konton iyo shan xubnood) ayaa dhankooda iska diiday in dayactir lagu sameeyo waqtigan garoonka Camp Nou, halka 875 xubnood (Siddeed boqol todobaatan iyo shan xubnood) oo kale ay ka aamuseen.
Xubnaha ka soo horjeestay dib u dhiska garoonka Camp Nou waxa ay ku doodeen in duruufaha dhaqaale ee jira aan la joogin xilligii la bilaabi lahaa qorshe kooxdu dib u dhis ugu sameynayso garoonkeeda, waxaa kale oo ay walaac ka muujiyeen deynta lagu leeyahay naadiga oo kor u dhaaftay 1 bilyan oo gini, taasoo ay sii raaci doonto lacagta lagu dhisayo garoonka oo iyana deyn lagu siin doono.
Shirkad aan la magacaabin ayaa bixinaysa lacagta mashruucan dhismaha garoonka Camp Nou oo loogu magacdaray ‘Espai Barca’, waxaana la isku raacay in shaqadiisu bilaabato dhammaadka fasal ciyaareedkan.
Labo sanadood ayuu garoonkan xirnaan doonaan waxaana kaddib Alabaaba dib loogu furi doonaa sanadka 2025-ka, markaasoo la filayo inuu noqdo mid ka mid ah garoommada ugu quruxda badan Adduunka.
Xilli ciyaareedyada 2022-23 iyo 2023-24 waxa ay kooxda Barcelona u ciyaari doontaa garoon kale, iyadoo la hadal hayo haatan inuu noqon doono garoonka Olympic Stadium oo ku yaalla Motjuic, waxaana marka la dhammaystiro Camp Nou oo la dhisay sanadkii 1957-kii uu qaadkiisu noqon doonaa 105,000 qof (Boqon iyo shan kun oo qof), taasoo ka dhigi doonta garoonka ugu qaadka qeyn qaaradda Yurub.
Dib u dhiska garoonka Camp Nou ayaa ku soo aadaya xilli kooxda Real Madrid ay xilli ciyaareedkan alabaabada u furtay garoonkeeda Santiago Bernabeu oo gabi’ahaanba la dumiyey dibna loogu dhigay lacag u dhexeysa 400 ilaa 500 oo milyan oo euro.